နိုင်ငံတကာ, 17 ဇူလိုင် 2016
ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပါတီညီလာခံ ပြင်ဆင်မှု (သတင်း ဓာတ်ပုံများ)
တူရကီနိုင်ငံ၏ တနင်္ဂနွေနေ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ (သတင်းဓါတ်ပုံများ)
တူရကီ နိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းဖို့ ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီး တရားသူကြီးတွေနဲ့ စစ်တပ်အရာရှိတွေကို ဆက်ပြီး ဖမ်းဆီးနေတာမှာ ဒီကနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ စစ်သားတွေ ထပ်ပြီးဖမ်းခံရပါတယ်။
“နိုင်ငံတော်ကို စော်ကားတာတင်မကတော့ဘူး။ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာမှ ရွေးပြီး တိုက်တယ်ဆိုတော့ အင်မတန်မှ ပြင်သစ်တွေရော သူတို့ရဲ့ မူဆလင်တွေပါ ၀မ်းနည်းပြီး ကြေကွဲပြီးတော့ နောက်ဆုံး ဒေါသတွေ ထွက်နေကြတာပေါ့ အခုအချိန်မှာ"
ကြံစည်သူတွေ အဓိကမှားယွင်းမှု ၂ ချက်ကတော့ - ၁. ဘာမှမလုပ်ခင် အစိုးရအကြီးအကဲကို ဖမ်း၊ ဒါမှမဟုတ် ကွပ်မျက်လိုက်ရမှာ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ၂. တင့်ကား၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ ဂျက်လေယာဉ် စတာတွေ ၀င်မစွက်နိုင်အောင် လုပ်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြခြင်း....
အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ဆိုသူကို လွှဲပေးဖို့ တူရကီသမ္မတတောင်းဆို
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီကတော့ - Gulen ကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို စဉ်းစားမှာဖြစ်ပေမဲ့ - Gulen ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘက်လိုက်မှုမရှိတဲ့ အထောက်အထားကို တင်ပြနိုင်မှသာ လွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တူရကီ ၀န်ကြီးချုပ် Binali Yildrim က စနေနေ့ နေလည်ပိုင်းက တိုင်းပြည်ကို မိန့်ခွန်းပြောကြား ခဲ့တာမှာ သောကြာနေ့ညက အာဏာသိမ်းဖို့ ကြိုးပမ်းမှုဟာ တူရကီနိုင်ငံ အတွက်တော့ အမည်းစက်တခု ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ပြင်သစ် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးကတော့ - Mohamel L. Bouhlel ဟာ ခပ်မြန်မြန်ပဲ အစွန်းရောက် ဖြစ်သွားပုံ ရတယ်လို့ စနေနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။ Bouhlel က သူဟာ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ် ၀ါဒီနဲ့ ဆက်နွယ်တယ် ဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ အတွင်း...
တူရကီနိုင်ငံက အစုအဖွဲ့အားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရကို ထောက်ခံသင့်တယ်လို့ သမ္မတနဲ့ ထိပ်ပိုင်း အမေရိကန် သံအမတ် အားလုံးက သဘောတူညီကြပါတယ်။
တူရကီမှာ စစ်သားတချို့ အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတာ အဆုံးသတ်သွားပြီလို့ သမ္မတအာဒိုဝန်က ပြောပါ တယ်။
တကယ်လို့သာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းနိုင် သွားပြီဆိုရင်တော့ ၂၀၀၃ခုနှစ်ကတည်းက အုပ်စိုးလာခဲ့တဲ့ သမ္မတ Tayyip Erdoğan ရဲ့ အစိုးရ အဆုံးသတ်ပြီး အဓိက နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ တရပ်ဖြစ်သွားပြီလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ် တူရကီနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးကိုသာမက အရှေ့အလယ်ပိုင်း ရဲ့ နိုင်ငံရေးကိုပါ ပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ တရုတ်ကာကွယ်ရေး စရိတ်တိုးနိုင်